Masar oo looga dareeray doorashada madaxweynaha (Yaa tartamaya?) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Masar oo looga dareeray doorashada madaxweynaha (Yaa tartamaya?)
Qaahira – Mareeg.com: Dalka Masar waxaa manta looga dareeray doorasho madaxtinimo oo ay ku tartamayan 2 musharrax oo kaliya, kuwaasoo kala ah: wasiirkii hore ee gaashaandhiga C/fataax Al-siisi iyo siyaasiga garabka bidix Xamdeyn Sabaaxi.
Cod-bixinta ayaa dhaceysa manta oo isniin ah iyo beeri oo talaado ah si loo doorto madaxweyne badela madaxweynihii hore ee ciidanku xilka ka tuuray Dr. Muxamed Mursi.
Amaanka dalka Masar ayaa aad loo adkeeyey, waxaana kumanaan askar ah la dhigay qeybaha kala duwan ee dalka Masar.
Waxaa la saadaalinayaa in C/fataax Al-siisi oo hogaamiyey ololihii lagu riday Dr. Mursi uu ku guuleysto doorashada, iyadoo haddii taasi dhacdo ay ka dhigantahay inuu hogaamnka Masar dib ugu noqday xukunii milateriga.
Qaar badan oo ka mid ah Masaarida ayaa aaminsan in Al-siisi oo 55 jir ah uu deganaasho kusoo dabaalo karo dalka Masar, halka kooxaha Islaamiyiinta ah ee Al-akhwaanul Musliniin ugu tun weynyihiin ay ka horjeedaan hogaankiisa.
Siyaasiga Xamdeyn Sabaaxi ayaa taageero xoog leh ka heysta kooxaha dhallinayarada ah, kuwaasoo doorbidaya inuu dalka hogaamiyo madaxweyne rayid ah. wuxuu shacaka u ballan qaaday inuu la dagaallamayo musuqa, dhanka kalana xoojinayo xuquuda madaniga ah.
Milateriga Masar ayaa riday madaxweynihii shacabku doortay Muxamed Mursi bishii Luulyo ee sanadkii hore kadib markii ay ku kaceen dad badan oo necbaa xarakada Islaamiga ah ee Al-akhwaanul Muslimiin.